Ugaandaa: Fala dhibee busaa sadarkaa Afrikaatti badhaafame - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Biriyaan meeshaa Maatibaabuu jedhamu hojjechuu kan eegale waggoota afur dura yeroo dhibee busaa cimaan qabamee tureedha
"Pirojektiin kuni dura akka taphaa eegalame. Nuti hiriyyootumatu walitti dhufee waan nama gammachiisu hojjenna jennee eegalle" jedha dargaggeessi umrii waggaa diigdamii-jahaa Biriyaan Giitaa,
"Garuu naannoo waggaa tokkoo booda, yaa hiriyyoo, nuti gammachuu guddaa qabna, amma garuu waan hojjechaa jirru kanaan jireenya namoota hedduu jijjiiruu ni dandeenya jedhee yaada."
Biriyaan gaaffii fi deebii kana BBC waliin kan taasise, Badhaasa Akkaadaamii Injinariingii Rooyaal kalaqa meeshaa dhibee busaa ittiin qoratanii akka injifate otoo hin beekiin torbee muraasa dura ture.
Waggoota afur dura, Biriyaanii fi hiriyyoonni isaa Yuunivarsiitii Makaareeree, meeshaa Maatibaabuu jedhamu kan otoo samuda dhiigaa hin fudhanne yeroo gabaabatti dhibee busaa qorachuuf fayyaduu fi kan irra deddeebiin faayidaa irra ooluu danda'u, kan gatiin isaas xiqqaa ta'e kalaqan.
Meeshichi ammaaf sadarkaa moodeelaa irra jiraatus, abbootiin seeraa hawaasaa maashinii qorannoo dhibee busaa kana salphatti bu'urarraa jijjiiruu fi dhibee balaafamaa kana faccisuuf kan gargaaruudha jechuun dubbatan.
Maagneetii fi Maatiiskooppii
Jechi 'Maatibaabuu' jedhu hiikkaan isaa Afaan Siwaahiliitiin 'Wal'aansa' jechuu yoo ta'u, maagneetii fi meeshaa akka ajaja dabarsuuf hojjetame Maatiiskooppii kan jedhamuun gargaaramuun qorannoof oola.
Maashinichi qubaan yeroo tuqamu, quba nama dhibee busaa qabuu irratti caarallaa diimaa ibsa.
Sababni isaa ammoo maxxantoonni dhibee busaa fidan dhiiga keessatti haftee xuraawaa Heemoozooyin jedhamu yeroo addaan baafatuudha kan maashinichi bifa diimaa mul'isa.
Namoonni maashinicha kalaqan, Maatibaabuun otoo saamuda dhiigaa hin buusin dhibee busaa qorata waan ta'eef, yeroo qorannoo saffisiisuun haala jiru bu'urarraa kan jijjiiruu fi fooyyessuu dha jedhanii amanu.
Keessattuu, lilmee daa'imman baay'ee dhukkubsuu fi dararu waan hin fayyadamneef bayyeessa ta'uu dubbatu.
Goodayyaa suuraa Hoospitaala Kiitgum maatii waa'ee dhibee busaa ijoollee isaaniitiin dhiphataniin guutameera.
Bara darbe,Yugaandaa keessatti namoonni Miliyoona sagalii fi kumni dhibba-shan dhibee busaatiin dararamaa turan.
Dhibee kanaan namoonni kuma shanii fi dhibba-tokko lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u, isaan keessaa ammoo harki caalaan daa'immani.
Jaakkeettii elektiriikii haleellaa isinirraa ittisu
Achaan Naaytii mucaa ishii umriin waggaa jahaa jalaa dhukkubsatee Hoospitaala Kiitgum kan kaaba Yugaandaa jiru keessatti siree irra isa bira teessee wayta yaalchistu agarre.
"Mucaan koo tasuma qabamee, nyaatas nyaachuu dide. Yeroo tokko gammachuun taphataa ture; mana barumsaas nagumaan deemee galee, guyyaa itti aanutti na jalaa dhukkubsate."
"Baadiyyaa bakka argama kilinikaa irraa baay'ee fagoo ta'e jiraanna. Ijoollee too sadeen hafan biroo kunuunsuu qaba; garuu ammoo maallaqa hin qabu."
"Sababa kanaaf, wal'aansaaf as dhufuuf guyyoota sadi natti fudhate. Akka guyyaan darbee sadarkaa hamaa irra gahe naan hin jenne Waaqa kadhadha" jette.
Goodayyaa suuraa Namoonni akka Achaan Naaytii, fi mucaan ishii Ooppiyoo Innoosant bakka argama kilinikaa irraa baay'ee fagoo ta'e jiraatu.
Biriyaan jalqaba kan yaada kana fide wayita dhibeen busaa fi Taayfooyidiin waliin isa dararanitti ture.
Wal'aansaaf hospitaala keessa otoo jiruu, meeshaa bakkaa bakkatti socho'uu danda'uu fi otoo lilmee hin fayyadamin akkasumas qaama namaa otoo hin waraanin, saffisaan dhibee busaa qorachuuf gargaaru akka kalaqamuu qabu yaadaa ture.
Hiriyyoota isaa ogummaa Injinariingii, Kompiitar Saayinsii fi Qorannoo Dhukkuba Daddarbootiin eebbifaman waliin ta'uun gareen hojii kana eegalan.
Moodeeliin Maatibaabuu inni haaraan dhaloota 5ffaa jedhamu daqiiqaa lama keessatti namni tokko dhibee busaa qabaachuu fi dhiisuu ifoomsa.
Maaykirooskooppii fayyadamanii beekuuf ammoo daqiiqaa soddomaa yookiin sanaa ol namatti fudhata.
Malli biroo inni yeroo ammaa faaydaa irra jiru, Qorannoo Fayyaa Saffisaa jedhamu yoo ta'u; bu'aa qorannoo argachuuf hanga daqiiqaa kudha-shanii kan fudhatuu fi samuda dhiiga namaa fudhachuun kan isa barbaachisuudha.
Kana malees,malli kun baay'inna maxxantoota yookaan paarasaayitoota dhibee kana sadarkaa olaanaan gayanii mul'isuu hin danda'u.
Maatibaabuun samuda dhiigaa homaa fudhachuu hin barbaadu, qorannoo taasifamuuf ogummaa olaanaa ta'e hin barbaadu waan ta'eef hawaasni ofumaa haala salphaan ta'een fayyadamuu danda'a.
Hanqina Qabeenyaa yookiin leecalloo
Dabalataanis Maatibaabuun bilbila ismaartii yookiin bilbila ammayyooftuu waliin neetworkiin kan walitti hidhame waan ta'eef odeeffannoo funaanuu fi garee dhimma fayyaatiif weerara dhibee busaa irratti akka dammaqan gargaara.
Daayrektarri Hoospitaala Kiitgum Doktar Jii'oofireey Akeenaa,"Ummanni heddu baadiyyaa fagoo keessa jiraata. Daandiiwwanis baay'ee rakkisaa waan ta'aniif, dhaabbilee fayyaa dhaquudhaaf baay'ee rakkatu" jedhan.
"Rakkoon kuni akka furamu yaaluudhaaf jennee, gareewwan fayyaa baadiyyaa keessa naannawuudhaan ummata wal'aanan qindeessinee jirra."
"Garuu nuti odeeffannoo waan hin qabneef, gareewwan keenya carraadhaan dhukkubsattoota argachuuf baadiyyaa keessa jooru."
Goodayyaa suuraa Akkaadaamiin Injinariingii Rooyaal meeshaan Maatibaabuu jedhamu kuni kan haala jiru bu'urarraa jijjiiru jechuun jaje.
Akka ragaan Ministeera Fayyaa Yugaandaa irraa argame ibsutti, biyyattii keessatti namoonni miliyoona tokkoo fi walakkaa ta'an dhibee busaa walxaxaa ta'een waggaa waggaan ni hubamu.
Kana jechuun, dhibee kana too'achuudhaaf sadarkaa hin danda'amne irra gahee ture jechuudha.
Dhibee busaa irraa atattamaa fi milkiidhaan fayyuun kan danda'u sa'aatii diigdamii-afur keessatti yoo wal'aanameedha.
Maatibaabuun bakka banaa rakkoo kanaa guutuudhaan wal'aansa kennamu mirkaneessuun saffisaan ummata tajaajila barbaadu dhaqqabuuf baay'ee gargaara.
Fala bu'uraa haaraa?
Wanti sirnaan ifatti taa'e garuu hin jiru. Meeshaan Maatibaabuu kuni mallattoo dhibee busaa dhibbeentaa saddeettama mirkaneessuu danda'a.
Sadarkaa idil-addunyaatti qabxii akka ulaagaatti kaayame isa dhibbeentaa sagaltami-sagal irraa baay'ee fagoodha. Kana ammoo Biriyaanis hubannoo qaba.
"Meeshaan keenya kuni moodeelota kanaan duraa caalaa guddina qaba. Kompiitara dhuunfaatiinis neetwoorkiin kan walqunnameedha."
"Quba keessan maashinicha keessa galchuu hin dandeettan, ifaan qofti saamuda dhiigaa irratti ifa waan ta'eefi."
"Amma garuu xiyyeeffannoon keenya sakatta'iinsa laaboraatoorii dhukkubsattoota dhibba-sadi irratti taasisuun, maashinicha keenya humna isaa sadarkaa guddisuudha. Booda ammo dizaayinii isaa ni fooyyessina."
Biriyaan kana kan dubbate maashinii isaa hamma korojoo harkaa geessu qabatee kilinikii qarqara magaalaa Kaampaalaa jiru tokko bira dhaabbateeti.
Kilinika kanaa fi kanneen akkanaa biroo heddu irra deemee daawwachuun akkaataa maashiniin isaa itti hojjetu ogeessotaaf ibsaa.
Rakkoon cimaan isa muudatus, Biriyaan Maatibaabuun akka sirnaan hojjetee milkaa'u abdii guddaa qaba.
Kanaaf ammoo, doolaara Ameerikaa kuma dhibba-jaha barbaadachaa jira. Waggoota lamaan dhufan keessattis maashinichi gabaa irratti akka argamu yaaduun hojjechaa jiru jechuudha.
Lafee cabe baayoogilaasiin wal'aanuu
Dhibee busaa qofa otoo hin taane, dhibeewwan akka Aniimiyaa fa'as qorachuuf gara fuulduraa akka fayyaduu danda'u abdii qaba.
Dhibeen busaa waggaa waggaan namoota walakkaa miliyoonaa ta'an lubbuu isaanii galaafachuu isaa hubannoo keessa yoo galchame, rakkoon kun hojii fi maqaa gaarii Biriyaanii ol ta'uun isaa ifa.
Namoota dhibee busaatiin hubaman kanneen keessaa ammoo,irra caalaan isaanii daa'imman biyyoota Afrikaa Sahaaraa gadii keessa kan jiraniidha.
Qophiin BBC kuni deeggarsa maallaqaa Faawundeeshinii Biilii fi Meeliindaa Geetisiin qophaa'e.